K: Everlasting Revolutionary Reggae
Everlasting Revolutionary Reggae
ခုရက်ထဲ..ရင်ထဲမှာမကောင်း။ ခံစားချက်တွေက..ထိုးထိုးထောင်ထောင်။ မေးခွန်းတွေကပေါက်ကွဲ။ ဒါပေမဲ့..ဘယ်သူ့ကို..ဘယ်လိုတိုင်တည်လို့..ဘာမေးခွန်းတွေမေးရမှန်းမသိ။
စိတ်ဓါတ်မကျချင်ပါ။ လက်တွေ့ပဲကျချင်တာ။ အို..ဘာမှမကျချင်ပါ။ ကျတာမကောင်း။
လက်က..တခုခုကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ အသံတွေ ခုန်ထွက်လာတယ်။ ထွက်ပေါက်တခု။ လိုက်ဆိုခွင့်
It's not all the glitters is gold Half the story has never been told
So now you see the light ...Stand up for your rights
Stand up for your rights...Get up, stand up,
stand up for your rights...Get up, stand up, don't give up the fight
Most people think Great good will come from the skies
Take away everything...And make everybody feel high..
You would look for yours on earth...
And now you've seen the light...
ဒီသီချင်းလေးဟာ..ဒေါ်စုရဲ့..အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့..ဖတ်ဘူးလိုက်တယ်။ (ဘယ်ထဲမှာလဲတော့..မမှတ်မိ) ဒေါ်စုတယောက်..အောက်စဖို့နေအိမ်မှာ..သူ့သား၂ယောက်နဲ့အတူ..သံပြိုင်ညီးရင်း..စည်းချက်
လိုက်နေကြတာ..ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းခဲ့မလဲ ။ ခုတော့..အေးချမ်းလှတဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဘ၀
ကို..စွန့်လွှတ်ခဲ့ပီ။ တခြား ဘယ်သူတွေရော..ကိုယ်ပိုင်ဘ၀တွေကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြသလဲ။ အဲဒီစွန့်လွှတ်ထားတဲ့..ဘ၀ပေါင်းများစွာကို ရင်းပီး..လျစ်လျူရှုပီး ..တခြား ဘယ်သူတွေရော.. ကိုယ်ပိုင်ဘ၀တွေကို.. မရမက..တည်ဆောက်နေကြသလဲ။
Bob Marley ရဲ့ Reggae သီချင်းတွေကို..ကိုယ့်ဆီယူလာပေးတာ ..အိမ်ကဘိုးတော်။ နိုင်ငံတကာတေးဂီတတွေကို..ယဉ်ပါးလေ့မရှိတဲ့..ကိုယ့်ကို..ဒေါ်စုနဲ့မျှားတော့ မခံနိုင်။ ခုတော့..Bob Marley..ဆိုတာ..ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သွားပီ။ တကယ်လည်း..သူ့သီချင်းတွေကို..စာသားနဲ့တိုက်ပီးသေသေချာချာ
နားထောင်ကြည့်တော့မှ.. စူးရှတဲ့အမှန်တရားတွေ.. ပျောက်ဆုံးနေတဲ့..တရားမျှတခြင်းတွေ..
အကြောင်းကို..ဘ၀နဲ့ရင်းပီးသိခဲ့ရတယ်။..ထူးထူးခြားခြား..အကြားအမြင်ပေါက်ပီး..အနာဂါတ်တွေကိုလည်း..ဟောခဲ့ဘူးတယ်။ သူ့ကိုယ်သူတောင် ၃၆ နှစ်မှာ သေမယ်လို့..သိနေခဲ့တယ်တဲ့။ စာသင်ခန်းတွေကို..စောစောစီးစီး..စွန့်ခွါခဲ့တဲ့..Bob..ဟာ...ဂျမေကာနဲ့..အမေရိကကိုသွားလိုက်ပြန်လိုက်လုပ်ရင်း....ဂီတလောကထဲကို..၁၃နှစ်သားလောက်ထဲက..ရောက်ခဲ့..တကယ့်ဘ၀ကြီးကို..
လက်တွေ့ကျကျကျင်လည်ခဲ့တယ်။ I shot the Sheriff ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့..Reggae တေးဂီတကို..နိုင်ငံတကာမှာ..စာမျက်နှာစဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။
(I shot the sheriffBut I didn't shoot no deputy, oh no!
Oh!I shot the sheriffBut I didn't shoot no deputy, ooh, ooh, oo-ooh.)Yeah!
All around in my home town,They're tryin' to track me down;
They say they want to bring me in guiltyFor the killing ofadeputy,
For the life ofadeputy.But I say:Oh, now, now. Oh!(
I shot the sheriff.) - the sheriff.(But I swear it was in selfdefence.)
Oh, no! (Ooh, ooh, oo-oh) Yeah!I say:
I shot the sheriff - Oh, Lord! -(And they say it isacapital offence.)
ကျနော်..ရဲမှူး ကြီး ကိုပစ်သတ်လိုက်တယ်..ဒါပေမဲ့..ရဲသား ကိုတော့မသတ်ခဲ့ပါဘူး.ရဲသား ကိုသတ်တယ်ဆိုပီး..အတင်းထောင်ဖမ်းနေလို့..ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်ဖို့..ရဲ မှူး ကြီး ကို ပစ်သတ်လိုက်ရတာပါ......တဲ့။
သဘောကျလိုက်တာဆိုတာ..။ ဘယ်လောက်ထိလိုက်တဲ့ သရော်ချက်ကလေးလည်းနော်။
နောက်ထပ် ကြိုက်တဲ့တပုဒ်လေ..No Woman , No Cry တဲ့။
No, woman, no cry;No, woman, no cry.
Said - said - said: I remember when we used to sitIn
the government yard in Trenchtown,
Good friends we have, oh, good friends we've lostAlong the way.
Everything's gonna be all right!I said,
နိုင်ကြတာလဲ။ နားမလည်နိုင်ကြတာလဲ။ မစာနာနိုင်ကြတာလဲ။ ကိုယ့်အမှန်အတွက်..သူ့အမှားကို..
Hear the children cryin' (One Heart!),Sayin':
Is thereaplace for the hopeless sinner,Who has hurt all mankind just to save his own beliefs?
သူပေါက်ကွဲနေသည်။ ကိုယ်လည်းပေါက်ကွဲ ပစ်ချင်သည်။
One Heart!What about - ? Let's get together and feel all right
So shall it be in the end (One Heart!),All right!
Let's get together and feel all right.One more thing!
There ain't no hiding place from the Father of Creation.Sayin':
(One Heart!)What about the - ?
Let's get together and feel all right.I'm pleadin' to mankind! (One Love!);
အဲဒီသီချင်းလေးဟာ..တကယ့်သမိုင်းဝင်သီချင်းလေးပါ။ Bob တယောက်..ဂျမေကာနိုင်ငံသားတွေ
One love One heart တေးဂီတပွဲကြီးကို.. ဂျမေကာမြို့တော်မှာ.. ခမ်းခမ်းနားနားကျင်းပခဲ့ပီး.. ဒီသီချင်းလေးကိုဆိုအပီးမှာ..ရွေးကောက်ပွဲအတွက်..အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့..ပါတီခေါင်းဆောင်၂ယောက်ကို...ဂီတစင်မြင့်ပေါ်ခေါ်ပီး..လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်စေနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့။
တကယ်ဆို..၁၉၄၅ မှာမွေးခဲ့ပီး ၁၉၈၁ မှာ..ကင်ဆာရောဂါနဲ့ဆုံးခဲ့တဲ့.. Bob Marley ရဲ့.. နံမယ် အကြော်ကြားဆုံးအချိန်တွေဟာ.. ၁၉၇၀ ၀န်းကျင်လောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့..သူ့အမည်ဟာ ခုထက်ထိ ကြော်ကြားနေဆဲဖြစ်တယ်။ သေပြီးမှ..Grammy lifetime ဆုကိုရခဲ့တယ်။ Reggae ရဲ့ legend ဖြစ်ခဲ့တယ်။..ကာရစ်ဘီယန်ဒေသတခုလုံးကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့....Bobရဲ့..တော်လှန်ရေး..ငြိမ်းချမ်းရေး..တေးသံတွေဟာ...ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးထိပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်။ အခုထိလည်း..အသက်ဝင်နေတယ်။ ပေါက်ကွဲလို့ကောင်းနေဆဲ။ မေးခွန်းတွေမေးနေဆဲ။
`နိုင်ငံတကာတေးဂီတတွေကို..ယဉ်ပါးလေ့မရှိတဲ့..ကိုယ့်ကို..ဒေါ်စုနဲ့မျှားတော့ မခံနိုင်´ လို့ရေးထားတာလေး ပြုံးမိတယ်။ No woman no cry သီချင်းကို အရင်ကတည်းက ကြိုက်ပေမယ့် အဆိုတော်ကို နာမည်နဲ့တကွ မသိခဲ့ဘူး။ သီချင်းတွေ တင်ထားတာ IE မှာ အကုန်နားထောင်လို့ရပေမယ့် Firefox မှာတော့ အောက်ဆုံးက တပုဒ် one love one heart ကိုပဲ နားထောင်လို့ရတယ်။ အပေါ်က သုံးပုဒ် နားထောင်လို့မရပါ။ Anyway, thanks for the music!
the best post on your blog!
i have seen his pictures around Chiangmai and listened to "No woman no cry" more than 20 times.
i did't know that he was the song's owner.
i also didn't know who he was.
now i know that he is not justamusician.
ဘော့မာလေရဲ့ အဲဒီသီချင်းကို ရင်းနှီးတယ်။ ဒါပေမယ့် စာသားတွေကိုသေချာမဖတ်ဖူးလို့ ဒီလောက် လေးနက်မှန်းမသိဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုပါပဲ။
အင်း… Bob Marley ကြိုက်တာချင်းတော့ တူနေပြီ။ အလွန် အထီးကျန်ဆန်ပြီး အေးခဲလွန်းလှတဲ့ ဆောင်းရက်ရှည်ကြီးတွေထဲမှာ ဟိုး..အနက်ရှိုင်းဆုံးမှာရောက်နေတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို အမှုန့်ထောင်း ရေဖျော် နေ့စဉ်မနက်တိုင်း သောက်ပြီး အလုပ်သွားရတဲ့ ရက်တွေဖြတ်ကျော်ရတုံးက ဒီ Bob Marley ပဲ။ ဘယ်လောက်ထိ ရူးသွပ်ခဲ့ သလဲဆိုရင် အာဖရိက ဗုံအရှည်ကြီးကို ၀ယ် ခေါင်းမှာ အ၀တ်စည်းပြီး ပန်းခြံတွေမှာ စုပြီးသွားတီး ခဲ့တယ်။ War ၊ Redemption Song ၊ Buffalo Soldier တွေ နားထောင် ပြီးလောက်ပြီလို့ ထင်တယ်။
အချိန်ရမှ အခြား ပို့စ် တွေကို ဖတ်ပါတော့မယ်နော့။ စကားမစပ် မိုးကုတ်က မျှစ် ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်လေး တွေ စားချင်လိုက်တာဗျာ။
U like his songs and I do the same. What I like most is I shot the sheriff. I really like to shoot the sheriff. Believe me.